के हो राज कुन्द्राको गिरफ्तारीपछिको काण्ड ? - Laltin.com
के हो राज कुन्द्राको गिरफ्तारीपछिको काण्ड ?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्ठीको पति एबम बिजनेसम्यान राज कुन्द्रालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोर्न फिल्म बनाएको अभियोगमा उनलाई मुम्बई प्रहरी क्राईम ब्रान्चले सोमबार गिरफ्तार गरेको हो। कुन्द्राको बिरुद्द यसै वर्षको फेब्रुअरीमा पोर्नोग्राफिक कन्टेन्ट बनाएको तथा एपको माध्यमबाट प्रसारित गरेको अभियोगमा केस गरिएको हो। यसअघि यो मुद्दामा मुम्बई प्रहरीले केही ब्यक्तिहरुलाई पहिला नै गिरफ्तार गरिसकेको छ।
गत फेब्रुअरीमा मुम्बई प्रहरीले ठुलो सेक्स र्याकेट्को पर्दाफास गरेको थियो जसले पोर्न फिल्म बनाएर एपको माध्यमबाट यसलाई प्रसारित गर्दथ्यो। मुम्बई प्रहरी कमिश्नरका अनुसार फेब्रुअरीमा मुम्बई प्रहरी क्राईम ब्रान्चले पोर्न फिल्म बनाएर अलग अलग ओटीटीको माध्यमबाट मानिसहरु सामु पुर्याउने गिरोह पत्ता लगाएको थियो जसका कारण प्रहरीले अलग अलग स्थानमा छापा मारेको थियो। छापामारीको दौरान प्रहरीको कब्जामा परेका चार जना ब्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्दा राज कुन्द्राको नाम अगाडी आयो र यसै आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरिएको हो।
प्रहरीको दाबी छ कि यो मामलामा राज कुन्द्रा मुख्य योजनाकार र आरोपी हुन। प्रहरीले अहिलेसम्म यो मामलामा एघार जनालाई गिरफ्तार गरिसकेको छ। प्रहरीका अनुसार हट हिट मुभिज नामक एपको माध्यमबाट अश्लील फिल्मको कारोबार हुने गर्दथ्यो जसलाई इन्स्टाग्राम, व्वाट्स एप, ट्विटर सिग्नल आदिको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिन्थ्यो।
प्रहरीले लगाएको अभियोगका अनुसार मुम्बई फिल्म सिटीमा काम खोज्दै आउने नवयुवतीहरुलाई फिल्ममा अवशर दिने बहानामा फसाएर अश्लील फिल्ममा बनाईन्थ्यो। मुम्बईको मलाड वेस्टको मडगाउमा एउटा बंगला भाडामा लिएर अश्लील सिनेमा बनाउने गरिन्थ्यो।
इन्टरनेटको माध्यमबाट अश्लील सामग्री प्रकाशित एबम प्रसारित गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ। यसैविच राज कुन्द्राले आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन र उक्त एपसंग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन।
Previous: अनौठो स्टाइल मा देखिए रणवीर सिंह
Next: सबै दक्षिण भारतीय अभिनेत्रीलाई पछि पार्दै रश्मिका मण्डना